လေ့ကျင့်ခန်းသည် dopamine D2 ကိုလက်ခံသော Parkinsons ရောဂါရှိသည့် In vivo ပုံရိပ်၌ (18F) fallypride (2010) - Brain On Porn
ပါကင်ဆန်ရောဂါ (2F) fallypride (18) နှင့်အတူ In vivo ပုံရိပ်ဖြင့်ကြွက်တစ်ကောင်တွင် dopamine D2010 receptor ကိုလေ့ကျင့်ခန်းကမြင့်တက်စေခဲ့သည်။
မှတ်ချက်များ။ ။ ပါကင်ဆန်၏မောက်စ်မော်ဒယ်တစ်ခုတွင်လူကြိုက်များသောလေ့ကျင့်ခန်းသည် dopamine D2 receptor များတိုးလာစေသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည် D2 receptor များကျဆင်းခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို desensitization ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်။
Volume ကို 25, Issue 16, စာမျက်နှာ 2777-2784, 15 ဒီဇင်ဘာလ 2010
Marta G. အVučković, M.Sc,1,2 Quanzheng လီ, Ph.D,3 ဗက် Fisher က, PT, Ph.D,4 အန်ဂျလို Nacca, Ph.D,5 ရစ်ချတ်အမ် Leahy, Ph.D,3 ယောဟနျသ P. Walsh, Ph.D,6 Jogesh Mukherjee က, Ph.D,7 စဲလ်လီဝီလျံ, B.Sc,2 မိုက်ကယ်ဒဗလျူ Jakowec, Ph.D,2,4 နှင့် Giselle အမ် Petzinger, MD2,4,*
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် MOV disorders
လက်ရှိလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအထူးကြပ်မတ်ပြေးစက်လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းမဲ့ MPTP ကြွက်များ၏ Basal ganglia အတွင်း dopamine D2 အဲဒီ receptor (DA-D2R) စကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများဆနျးစစျဖို့ပဲ။ synaptoneurosomes ၏အနောက်တိုင်း immunoblotting ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုခြင်းနှင့် Vivo အတွက် positron ထုတ်လွှတ် tomography အဆိုပါ DA-D2R တိကျတဲ့ ligand အလုပ်သမား (PET) ပုံရိပ် [18F ကို] fallypride ကျနော်တို့မြင့်မားသောပြင်းထန်မှုပြေးစက်လေ့ကျင့်ခန်းအများစုကိုဆားကုသကြွက်နှိုင်းယှဉ် MPTP အတွက်အသံထွက်ခဲ့ striatal DA-D2R စကားရပ်တစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ dopamine-ကုန်ခမ်း Basal ganglia အတွက် DA-D2R အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေအပြောင်းအလဲများကိုအလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) function ကိုများနှင့်အမူအကျင့်ပြန်လည်နာလန်ထူပြောင်းလဲပစ်၌ဤအဲဒီ receptor ၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ အရေးကြီးတာက, ဒီလေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပေပုံရိပ်သုံးပြီးများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် support [18F ကို] High-ပြင်းထန်မှုပြေးစက်သင်တန်းတက်ရောက်ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် DA-D2R အပြောင်းအလဲများကိုဆန်းစစ်ဖို့ fallypride ။
keywords: positron ထုတ်လွှတ် tomography, Basal ganglia, neuroplasticity, ပြေးစက်လေ့ကျင့်ခန်း
လေ့ကျင့်ခန်းပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) နှင့်အတူလူနာအတွက်မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။1-3 ထိုကဲ့သို့သော 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) mouse ကိုအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ, မော်တာအပြုအမူအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေတိုးတက်မှု၏မော်လီကျူးယန္တရားများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အရေးပါသော tool ကိုပေး။4-6 အဆိုပါ dopamine D1 နှင့် D2 receptors (DA-D1R နှင့် DA-D2R) striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအပေါ် dopamine ၏အဓိကပစ်မှတ် (MSNs) ဖြစ်ကြပြီးဇီဝကမ္မဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆယ်လူလာအချက်ပြ modulate ။ အထူးသဖြင့် DA-D2R ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (, LTD), အ dorsolateral striatum အတွက်မော်တာ function ကို၏ encoding ကမှဦးဆောင် glutamatergic နှင့် dopaminergic neurotransmission ၏ပေါင်းစည်းမှုပါဝငျကွောငျး Synaptic plasticity တစ် form မှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ မော်တာထိန်းချုပ်မှုအတွက် DA-D2R ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားကျနော်တို့မော်တာ function ကိုအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းမြှင့်တင်ရန်တိုးတက်မှု striatal DA-D2R စကားရပ်တစ်ခုတိုးဖို့အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်ရှာ၏။
DA-D2R radiotracers နှင့်အတူ -imaging Positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) လူသားများတွင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် longitudinal လေ့လာမှုများထွက်သယ်ဆောင်ရန်စွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူယခင်လေ့လာမှုများသာမန်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတာရန်ကြိုးစားခဲ့ကြ7 နှင့်များ၏စည်းနှောင်မရှိပြောင်းလဲမှု [11ကို C] raclopride dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုဖို့စာရေးဆရာများဦးဆောင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် DA-D2R စကားရပ်နှင့် Synaptic လှုပ်ရှားမှုအပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရသေးပါ။ အဆိုပါ PET-ပုံရိပ် ligand [18F ကို] fallypride ကြောင့် DA-D2R နှင့် DA-D3R နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအမြင့်မားဆှဖှေဲ့နှင့်တိကျသောဤဆနျးစစျဖို့အကောင်းဆုံး tool ကိုဖြစ်တယ်, [မတူပဲ11ကို C] raclopride ကြောင့်အလွယ်တကူ endogenous dopamine ၏အခြေခံအဆင့်ဆင့်ကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းပေးမထားပါ။7-10 ဤသည်ကိုမသက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ reserpine pretreatment (endogenous dopamine ပျက်ဆီးဖို့) [ကအတည်ပြုခဲ့သည်18F ကို] binding fallypride,9,11 ဒါပေမဲ့သိသိသာသာတိုးမြှင့် [11ကို C] binding raclopride8 ကြောင်း (အသိသာစည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့အတွက်အပြောင်းအလဲမှစွပ်စွဲခဲ့သည်Kd) ထက်အဲဒီ receptor နံပါတ် (Bmax ကို).
[၏ binding အလားအလာ (BP) အဖြစ်18F ကို] fallypride င်း၏အပေါ်အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုအကြံပြုခြင်း, dopamine တွေပျက်စီးမှုကြောင့်အပြောင်းအလဲများမှခံနိုင်ရည် Kd or Bmax ကို အခြေခံသို့မဟုတ်လျော့ကျပြည်နယ်မှာကျနော်တို့ [အသုံးပြုသော18F ကို] ကြောင့်အထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ခန်းအတူ MPTP mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက် DA-D2R စကားရပ်တိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆစမ်းသပ်ဖို့ fallypride ။9,10,12,13 ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေပုံရိပ်အစီအမံကိုထောကျပံ့ဖို့ကျနော်တို့အတူတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက် synapses များ၏အဆင့်မှာ DA-D2R ပရိုတိန်းစကားရပ်ပြောင်းလဲမှုများတိုင်းတာရန် synaptoneurosomal ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၏အနောက်တိုင်း immunoblot ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ဖြည့်စွတ် technique ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာ DA-D2R စကားရပ်များနှင့် [ပေါ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှုသတင်းပို့18F ကို] ဆားသို့မဟုတ် MPTP ဖြစ်စေနဲ့ကုသကြွက်အုပ်စုများအတွက် fallypride ။
တိရစ္ဆာန်များ, ကုသမှုအဖွဲ့များနှင့် MPTP အုပ်ချုပ်ရေး
အထီး C57BL /6ကြွက် 8 ရက်သတ္တပတ်ဟောင်း (ချားလ်စ်မြစ် Laboratories, ဝီလ်မင်တန်, MA) အုပ်စုတစ်စု-သျော 12 ဇအလင်း / 12 ဇမှောင်မိုက်သံသရာအောက်မှာအပူချိန်-controlled အခန်းတစ်ခန်း၌နေကြ၏။ အဆိုပါ USC IACUC ကအတည်ပြုအဖြစ်အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက် NIH လမ်းညွှန်နှင့်အညီဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ 164 ကြွက်များ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းလေးကုသမှုအုပ်စုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်: (1) ဆား (ဎ = 42), (2) ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း (ဎ = 55), (3) MPTP (ဎ = 57) နှင့် (4) MPTP ပေါင်း လေ့ကျင့်ခန်း (ဎ = 42) ။ ml ကို 20% NaCl 0.9-ဇကြားကာလသို့မဟုတ်2လေး intraperitoneal ထိုးမှာ, 0.1% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်း; တွေ့ရှိရပါသည်ဘို့, ကြွက် 0.9 လေး intraperitoneal ထိုး / ကီလိုဂရမ် MPTP (Sigma-Aldrich, စိန့်လူးဝစ်, MO ကိုအခမဲ့-အခြေစိုက်စခန်း) MG ကိုလက်ခံရရှိ ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည် striatal dopamine အဆင့်ဆင့်၏ HPLC ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့်အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ 10 ရက်ပေါင်း Post-MPTP အုပ်ချုပ်ရေးမှာ% dopamine လျော့ကျဆားကြွက် (ပရိုတိန်း၏ 82.2 ± 48.0 ng / မီလီဂရမ်) နဲ့နှိုင်းယှဉ် MPTP ကြွက် (ပရိုတိန်း၏ 8.4 ± 269.5 ng / မီလီဂရမ်) တွင် 24.9 ရှိ၏။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏အဆုံးမှာ MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်တွေအကြား striatal dopamine အဆင့်ဆင့်မသိသိသာသာခြားနားချက် (69.8 ± 11.7 ng / ပရိုတိန်း၏မီလီဂရမ်) MPTP (77.9 ± 12.0 ng / ပရိုတိန်း၏မီလီဂရမ်) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရှိ၏။ သို့သော်ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်တွေမှာ striatal dopamine တစ်သိသိသာသာတိုး (ပရိုတိန်း၏ 315.2 ± 9.0 ng / မီလီဂရမ်) ဆား (ပရိုတိန်း၏ 246.9 ± 19.8 ng / မီလီဂရမ်) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရှိခဲ့ (F(3,16) = 7.78; P <0.05) ။
လေ့ကျင့်ခန်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်5ရက်ပေါင်းစတင်ခဲ့သည်။ နှစ်ခုလေ့ကျင့်ခန်းအုပ်စုများ (ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း) မှကြွက်ကြာချိန်ရောက်ရှိဖို့ 100 ပတ် incremental အမြန်နှုန်းမှာ 6-စင်တီမီတာစက်တပ်ပြေးစက် (Exer 6M, ကိုလံဘတ်တူရိယာ, OH) (5 ရက် / ရက်သတ္တပတ်) မှာ run ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် 60 မိ / နေ့နှင့် 18-20 မီတာ / min ၏မြန်နှုန်း၏။5,6
မောက်ဦးနှောက်၏တစ်ဦးကသုံးရှုထောင်ထုထည်ကြီးမားသော T1 မာန်တင်းသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု (MR) ပုံရိပ်တစ် 7-T က Micro-MRI စနစ် (Bruker Biospin, Billerica, MA) နဲ့ရယူခဲ့ပါတယ်။ image ကိုရှာမှီး၏ parameters ခဲ့ကြသည်: TE = 46.1 ms, TR = 6292.5 ms, 0.4-မီလီမီတာအချပ်အထူ, 0.45-မီလီမီတာ interslice အထူ, 128 × 128 128 matrix ကိုအရွယ်အစား×။
၏ပေါင်းစပ် [18ယခင်က [အတူ tosyl ရှေ့ပြေး၏ nucleophilic အစားထိုးတုံ့ပြန်မှုမှတဆင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့က F] fallypride ဖျော်ဖြေခဲ့သည်18တစ်ထုံးစံလုပ် radiochemistry ယန္တရားကို အသုံးပြု. က F] ။12 သန့်စင်မိုဘိုင်းအဆင့် (8 2) အဖြစ် acetonitrile နှင့်ဆိုဒီယမ်ဖော့စဖိတ်ကြားခံသုံးပြီး C55 (45) Phenomenex Luna ကော်လံအပေါ်ပြောင်းပြန်-အဆင့် HPLC ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ခရမ်းလွန်ကိုစုပ်ယူ 254 nm နှင့် AUFS 0.05 မှာတိုင်းတာခဲ့သည်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွအထွတ်အထိပ် (retention ကိုအချိန် 17 မိ) မှသက်ဆိုင်ရာ [18F ကို] fallypride, စုဆောင်းခံခဲ့ရကာ rotary ရေငွေ့ပျံပေါ်ဖယ်ရှား solvent ။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန် pyrogenicity, မြုံ, သော pH, နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Chromatography အားဖြင့်အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ radiochemical သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တစ် C8 (2) Phenomenex Luna ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးရေ HPLC စနစ်ဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှု 3,000-12,000 Ci / mmol ၏အကွာအဝေး၌ရှိ၏။
ပေတိုင်းတာခြင်းများနှင့် Image ကိုသုံးသပ်ခြင်း
(6 MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဎ = ဎ =3ဆား; ဎ =5ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း;; ဎ =6MPTP) နှစ်ဆယ်ကြွက်ပေပုံရိပ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စကင်တစ်ဦးနှင့်အတူကို attenuation ဆုံးမခြင်းများအတွက် 4-မိဂီယာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးနောက် 60-မိစာရင်း mode ကိုဝယ်ယူ protocol ကိုအတူ Concorde microPET R20 စကင်နာ (CTI Concorde Microsystems ကို, နို့ဗိုင်း,) ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည် 68Ge ရင်းမြစ်။ [18F ကို] fallypride (10.92-11.28 MBq) ကိုထုတ်လွှတ်စကင်ရဲ့ start မှာအမြီးသွေးကြော (တစ်ခုတည်း bolus) မှတဆင့်ထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ ကြွက် 2% isofluorane နှင့် 98% အောက်စီဂျင်နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲနေသောစာရင်း mode ကိုဒေတာ 26 ဘောင် (6 × 20 စက္က,4× 40 စက္က,6× 1 မိနှင့် 10 ×5မိနစ်) နှင့်အတူ sinograms မှခွဲထားခဲ့သည်နှင့် OSEM နှစ်ခုကြားမှာ (အမိန့်အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်မျှော်လင့်လုပျသငျ) ကပြန်လည်တည်ဆောက် 18 အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် အဆိုပါမြေပုံ၏ကြားမှာ (အများဆုံးတစ် posteriori) ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး algorithm ကို။14 ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးပုံရိပ်တွေဦးခေါင်းဆံ့ဖို့လှီးဖြတ်ခြင်းနှင့် linearly ထဲမှာ interpolated ခဲ့ကြသည် Z128 × 128 မီလီမီတာ× isotropic 63 အတူ 0.4 × 0.4 × 0.4 image ကိုထုတ်လုပ်ရန် -direction3 voxels ။ အဆိုပါ striatum ၏ high-resolution binding အလားအလာ (BP) ပုံရိပ်တွေဟာ multilinear တစ်ရှူးကိုကိုးကားမော်ဒယ်သုံးပြီးပြန်မဆောက်ပြောင်းလဲနေသောပုံရိပ်များကိုကနေတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်15 နှင့် Logan ကွက်16 အဆိုပါ striatum အတွက်မြင့်မားတဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့် cerebellum (ရည်ညွှန်းဒေသ) တွင်အလွန်နိမ့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ။ အကျိုးစီးပွား (striatum နှင့် cerebellum) ၏ခန္ဓာဗေဒဒေသများကိုယ်တိုင်ပေပုံရိပ်တွေအတွက်နှစ်ဦးစလုံး hemisphere မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ခဲ့ကြသည် Rview (ဗားရှင်း 8.21Beta) ကို အသုံးပြု. MRI နှင့်အတူ coregistered ။17 ၏ binding တိကျတဲ့၏အရေအတွက် [18မောက် striatum အတွက်က F] fallypride equilibrium မှာခညျြနှောတိကျတဲ့ / nonspecific များ၏အချိုးတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း, BP တန်ဖိုးကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည်။18,19 အဆိုပါ striatum အတွက်စည်းနှောင်တိကျတဲ့သရုပ်ပြလေးကြွက်, ligand ဆေးထိုးပြီးနောက် 60-μmအထူမှာ sectioned လျင်မြန်စွာအရည်နိုက်ထရိုဂျင်အတွက်အေးခဲဦးနှောက်, 30 မိရိတ်သိမ်းခြင်း, အပိုင်းတစ် phospho-image (တိုင်ဖွန်း 9200, GE Healthcare Inc ကို, Piscataway မှ apposed ခဲ့ကြသည် , NJ) (သဖန်းသီး။ 1) ။ လေ့လာရေး [ကြောင်းပြသကြ18F ကို] fallypride အဆိုပါ DA-D2R မှအထူးချည်နှောင်နှင့်အမျှအနည်းငယ်သာ DA-D3R အဆိုပါ striatum ၌တည်ရှိ၏, binding DA-D2R ထေိုဖော်ပြသည်။9,10,12,13
[18F ကို] Fallypride မောက် striatum မှမြင့်မားသောခွန်အားကိုတိကျတဲ့ပြသထားတယ်။ ဘယ်ဘက် panel ကိုအနီးစပ်ဆုံးအဆင့်ကို bregma 0.20 မှာ Coronal အပိုင်းတစ်ခုခန္ဓာဗေဒက rendering ပြသထားတယ်။ ညာဘက် panel ကိုသက်ဆိုင်ရာအထူးကြပ်မတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး autoradiograph ပြသ ...
အဆိုပါလေ့လာမှု၏အဆုံးမှာဦးနှောက်ကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပြီး dorsal striatum dorsal နယ်စပ်အဖြစ် Corpus callosum နှင့်အတူ 1.2 မှ bregma 0.6 ကနေခန္ဓာဗေဒဒေသများသို့သက်ဆိုင်ရာလတ်ဆတ်ခွဲဖြာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နယ်စပ်ကဲ့သို့၎င်း, အဖြစ် anterior commissure အထက် Corpus callosum များ၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အသှငျအပွငျခဲ့ကြသည် အဆိုပါ ventral နယ်စပ်။20
HPLC Dopamine လေ့လာခြင်းနှင့်၎င်း၏ Metabolites
Dopamine striatal တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအတွက်အဆင့်ဆင့် (ဎ = အုပ်စုကိုနှုန်း 4) လြှပျစစျထောက်လှမ်းနှင့်အတူ HPLC ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။6 အဆိုပါစနစ်အားတစ်ဦး 150 × 3.2 တပ်ဆင်ထားကာ ESA Auto-sampler (ESA, Chelmsford, MA) ၏လေးတပ်ဆင်ထားမီလီမီတာ reverse-အဆင့်ကို C-18 ကော်လံ (3μmအချင်း) နှင့်တစ်ဦး CoulArray 5600A (ESA, Chelmsford, MA), ပါဝင်သည် -75, 50, 220 နှင့် 350 MV မှာသတ်မှတ်ထားအလားအလာနှင့်အတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆဲလ် -channel ။
အနောက်တိုင်း Immunoblot အားသုံးသပ်ခြင်း
DA-D1R နှင့် DA-D2R ၏ Synaptic စကားရပ်အပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု synaptoneurosome ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ရှစ်ရေကူးကန် dorsolateral striatum ထံမှလတ်ဆတ်လုပ်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။21 ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုနှုန်း 24 ကြွက်တစ်ဦးစုစုပေါင်းကြွက်သုံးစုံအပေါ်ဖျော်ဖြေ (ဎ =3အုပ်စုတစ်စုနှုန်း preps) ခံခဲ့ရသည်။ DA-D1R (~ 50 KDA) အတွက်ပရိုတိန်း၏ဆွေမျိုးစကားရပ်, DA-D2R (~ 50 KDA), tyrosine hydroxylase (58 KDA), dopamine Transporter (68 KDA) နှင့်α-tubulin (တင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်) (50 KDA) အနောက်တိုင်း immunoblot အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်22 စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်မူလတန်းပဋိ (ယုန် polyclonal နှင့်မောက်စ် monoclonal ပဋိ, Millipore, Temecula,, CA) ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပရိုတိန်းခညျြအနှောဆှဖှေဲ့သန့်ဆိတ်သငယ်ကိုဆန့်ကျင်ယုန်သို့မဟုတ် IRDye မှ conjugated Anti-mouse ကိုအလယ်တန်းပဋိအားဖြင့်မြင်ခဲ့သည်680 သို့မဟုတ် IRDye800 (Rockland, Gilbertsville, PA) ။ ချောင်း signal ကိုအနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်ပလက်ဖောင်းအနီး Li-ကော Odyssey ထဲမှာ filter ကို scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် Odyssey 2.1 software ကို (Li-ကောဇီဝနည်းပညာ, လင်ကွန်း, NE) ကို အသုံးပြု. quantified ခဲ့သည်။ ရလဒ် (% 100 ဟုသတ်မှတ်) ကိုဆားအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဆွေမျိုးစကားရပ်အဆင့်ဆင့်အဖြစ်ပြသထားပါသည်။
၏ကို BP အတွက်အုပ်စုများအကြားကွာခြားချက်များ [18F ကို] fallypride, DA-D1R နှင့် DA-D2R ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းဘာသာရပ်အချက် (MPTP vs. ဆား) နှင့်ဘာသာရပ်အချက်အတွင်းအဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်း (အဘယ်သူမျှမလေ့ကျင့်ခန်း vs. အကြားအဖြစ်ကုသမှုနှင့်အတူကှဲလှဲ၏ Two-လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် လေ့ကျင့်ခန်း) ။ အကျယ်ချဲ့ပြေးစက်အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ဘို့, အချိန်ဘာသာရပ်အချက် (အပတ်ကစသည်တို့ကို 1, 2) နှင့်ကုသမှုဘာသာရပ်အချက် (MPTP vs. ဆား) အတွင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်တို့အကြားအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ Bonferroni post ကို hoc စမ်းသပ်အကျိုးစီးပွားအရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်သည့်အခါမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့ပြင်ပေးဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အရေးပါမှုအဆင့်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည် P <0.05 ။ အုပ်စုကွဲပြားခြားနားမှုများ၏လက်တွေ့ကျကျအရေးပါမှုကိုလေ့လာရန်အုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များပမာဏကိုခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (ES) (ES = Mean)Group မှ 1 - ပေမဲ့Group မှ 2/ SD ကထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှ) ။ ES သည်အကျိုးသက်ရောက်သည့်လူ ဦး ရေအတွင်းကုသမှု၏သက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်ပြီးသတ်မှတ်ထားသည့်စံနှုန်းများအရသေးငယ်သည် (<0.41)၊ အလယ်အလတ် (0.41-0.70) သို့မဟုတ်ကြီးမားသော (> 0.70) အရဖော်ပြသည်။23 analysis Windows အတွက် Prism5 (GraphPad, San Diego မှ,, CA) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
high-intensive စက်ခါးပတ်ပေါ်လေ့ကျင့်ခန်း MPTP-ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်တွေအတွက်မော်တော်အပြုအမူတိုးတက်လာသော
MPTP-ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မတိုင်မီကနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများစတင်နှစ်ခုလေ့ကျင့်ခန်းအုပ်စုများအားလုံးကိုကြွက်များ၏ပျမ်းမျှအားအခြေခံအလျင်အလားတူ (ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း: 11.7 ± 1.1 မီတာ / မိနစ်နှင့် MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း: 11.2 ± 1.1 မီတာ / မိနစ်) တို့ဖြစ်သည်။6မှတဆင့်ရက်သတ္တပတ် 1 ရက်သတ္တပတ်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းဟာ MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာ သာ. ကွီးမွတျလုပျသငျအလျင်ပြသသည့်ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအုပ်စုများအတွက်အကျယ်ချဲ့ပြေးစက်အလျင်တိုးတက်လာသော4(သဖန်းသီး။ 2) ။ နှင့်ရက်သတ္တပတ်5(17.2 ± 3.6 မီတာသို့သော် MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များအလားတူလုပျသငျပြေးစက်တပတ် 22.0 (: 1.5 ±6မီတာ / မိနစ်နှင့်ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း 19.2 ± 1.2 မီတာ / မိနစ် MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်း) တွင်ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များအဖြစ်အမြန်နှုန်းခဲ့ / မိနစ်နှင့် 22.2) အသီးသီး 0.9 မီတာ / မိနစ်±။ ယခင်ကအစီရင်ခံအဖြစ်, ပြေးစက်လေ့ကျင့်ရေးခံယူမ MPTP-lesioned ကြွက်တွေဟာ 7.0-အပတ်ကလေ့ကျင့်ခန်းကာလရဲ့အဆုံးမှာ 0.3 ±6မီတာ / မိနစ်သူတို့ရဲ့လုပျသငျအလျင်နှင့်အတူမော်တာအပြုအမူများမပါအလိုအလျောက်ပြန်လည်နာလန်ထူပြသ။5
စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွက် MPTP mouse ကိုအတွက်မော်တာအပြုအမူပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ အများဆုံးပြေးဆား၏မြန်နှုန်း (ဎ = 12) နှင့် MPTP (ဎ = 12) ကစက်တပ်ပြေးစက်ပေါ်တွင်ကြွက်အပတ်တိုင်းရဲ့အဆုံးမှာစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အဆိုပါအခြေခံပြေးစက်အလျင်မီ MPTP ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မှတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ...
high-intensive စက်ခါးပတ်ပေါ်လေ့ကျင့်ခန်း DA-D2R ပရိုတိန်း Striatal DA-D1R တိုးမြှင့်သော်လည်းမ
high-ပြင်းထန်မှုပြေးစက်လေ့ကျင့်ခန်း differential ထိခိုက်နစ်နာ DA-D2R နှင့် dorsal striatum ထံမှ synaptoneurosomal ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက် DA-D1R အဆင့်ဆင့်အနောက်တိုင်းချေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်း (သဖန်းသီး။ 3) ။ MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များ (MPTP ကြွက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် striatal DA-D48.8R အတွက် 2% တိုးခဲ့ပါသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 3B), နှင့် DA-D2R ပရိုတိန်းအဆင့်တွင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် MPTP ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အကြားသိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန် (F(1,8) = 6.0; P <0.05) ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အုပ်စုများအကြား DA-D1R ပရိုတိန်းပမာဏကိုလေ့ကျင့်ခန်းသက်ရောက်မှုမရှိပါ။သင်္ဘောသဖန်း။ 3A; F(1,8) = 0.1, P = 0.78) ။ တစ်ဦးတည်း lesioning MPTP သိသိသာသာပြောင်းလဲဖြစ်စေ DA-D2R (မပြုခဲ့F(1,8) = 0.0; P = 0.88) သို့မဟုတ် DA-D1R စကားရပ် (F(1,8) = 0.0; P = 0.92) ။ midbrain dopaminergic အမျှင်သမာဓိအပြင်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောပရိုတိန်းအမှတ်အသားများ, tyrosine hydroxylase (TH; သင်္ဘောသဖန်း။ 3C) နှင့် dopamine Transporter (DAT; သင်္ဘောသဖန်း။ 3D), (MPTP သိသိသာသာ striatal TH ပရိုတိန်းလျော့နည်းသွားကြောင်းပြသF(1,8) = 757.3; P <0.05) နှင့် DAT စကားရပ် (F(1,8) = 218.0; P <0.05) ။
လေ့ကျင့်ခန်း DA-D2R သော်လည်းမ DA-D1R striatal ပရိုတိန်းထိန်းညှိတက်-select လုပ်ပါ။ panel ကို (A) DA-D1R ပရိုတိန်းများအတွက် dorsal striatum ထံမှ synaptoneurosome ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၏အနောက်တိုင်း immunoblot ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြသထားတယ်။ အကြားအဘယ်သူမျှမကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိခဲ့သည် ...
high-intensive စက်ခါးပတ်ပေါ်လေ့ကျင့်ခန်း [Striatal တိုးမြှင့်18အလားအလာ (BP) binding က F] Fallypride
Receptor protein အားထုတ်ဖော်နေစဉ်အနောက်တိုင်း immunoblotting ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစုစုပေါင်း antibody ကို epitopes (မျက်နှာပြင်နှင့်ပြည်တွင်းဆယ်လူလာစတိုးဆိုင်နှစ်ဦးစလုံး) တိုင်းတာ, Vivo အတွက် high-ဆှဖှေဲ့ DA-D2R-တိကျတဲ့ radioligand နှင့်အတူပေ-ပုံရိပ် [18F ကို] fallypride ligand ခညျြနှောငျ DA-D2R ၏ရရှိမှုအပေါ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှု delineate နိုင်ပါတယ် (သဖန်းသီး။ 4) ။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိကွောငျးကိုဖျောပွထားပါF(1,16) = 12.3; P <0.05) နှင့် MPTP ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (F(1,16) = 160.3; P <0.05) MPTP နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများအကြားသိသာသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ (F(1,16) = 3.5; P = 0.07) [အပေါ်18F ကို] ကို BP fallypride ။ အဆိုပါ Bonferroni post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (MPTP နှင့် MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်တွေအကြားကို BP တန်ဖိုးများအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ပြသt = 1.1, DF = 1, 16; P <0.01) နှင့်ဆားနှင့်ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (t = 4.1, Df = 1, 16; P > 0.05) ။ အထူးသဖြင့် MPTP နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များတွင် ၇၃.၁% တိုးခဲ့သည်။18(:; က F] MPTP ကြွက် (7.1 ± 0.7 MPTP ကြွက်များအတွက်ပျမ်းမျှအားကို BP တန်ဖိုးများ 4.1 ± 0.3 MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ပျမ်းမျှအားကို BP တန်ဖိုးများ) ကိုနှိုင်းယှဉ် BP fallyprideသင်္ဘောသဖန်း။ 4B) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆားပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များ [အတွက် 8.2% တိုးခဲ့ပါသည်18F ကို] ဆားကြွက် (13.2 ± 1.0) ကိုနှိုင်းယှဉ် BP (12.2 ± 0.3) fallypride ။ ဤအတွေ့ရှိချက် "အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား" တွက်ချက်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည့်ဆားအုပ်စုများ (ES = 2.61) အကြားလေ့လာတွေ့ရှိထက် MPTP အုပ်စုများ (ES = 0.94) တို့အကြားပိုကြီးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား။
လေ့ကျင့်ခန်းရွေးချယ်တိုးပွါး [18F ကို] MPTP ကြွက်များ၏ striatum အတွက် binding အလားအလာ (BP) fallypride ။ panel ကို (A) ပြပွဲ [18F ကို] က Coronal orientation ကို (လက်ဝဲဘက်ခြမ်း) နှင့်အလျားလိုက် orientation ကို (လက်ျာဘက်၌) တွင် BP ကိုယ်စားလှယ်ပုံရိပ်တွေ fallypride ။ အဆိုပါစကေးဘား ...
ဒီလေ့လာမှုက [High-ပြင်းထန်မှုပြေးစက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတိုးစေပါတယ်ကြောင်းပြသ18F ကို] MPTP ကုသကြွက်များ၏ striatum အတွက် BP (DA-D2R ရရှိနိုင်မှု) fallypride ။ ပြောင်းပြန် MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းအကြားစုစုပေါင်း striatal dopamine အဆင့်ဆင့်မသိသိသာသာပြောင်းလဲမှု MPTP မျှစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိခဲ့သည်။ [18F ကို] fallypride သူ၏ကို BP တစ်ခုထင်ဟပ်နေတဲ့မြင့်မားရွေးချယ် DA-D2 / D3R ရန်ဖြစ်ပါသည် Vivo အတွက် ရရှိနိုင် receptors ၏အတိုင်းအတာ (Bmax ကို) / binding ဆှဖှေဲ့ (Kd) ။ DA-D2Rs dorsal striatum အတွင်းမြင်သာထင်သာ dopamine အဲဒီ receptor မျိုးကွဲ [အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု-သွေးဆောင်တိုးဖြစ်သကဲ့သို့18F ကို] ကို BP DA-D2R အရေအတွက်တိုးကိုယ်စားပြုအနောက်တိုင်း immunoblotting နှင့် situ Hybrid histochemistry အတွက်သုံးပြီး striatal DA-D2R mRNA မှတ်တမ်းစကားရပ်တစ်ခုတိုးဖေါ်ပြခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုများကို အသုံးပြု. ပရိုတိန်းစကားရပ်တစ်ခုတိုးကထောက်ခံနေသည် fallypride ။5 ကို BP မြင့်၏ဤအနက်ကိုထပ်မံ [၏အချက်ကြောင့်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ကထောက်ခံနေသည်18F ကို] dopamine အားဖြင့် fallypride dopamine အဆင့်ဆင့်အနိမ့်ရှိနေဆဲအဖြစ် MPTP ကြွက်တွေမှာပေါ်ပေါက်နိုင်ဖွယ်မဟုတ်ပါဘူး။24 သိသာစည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့အတွက်ထို့ကွောငျ့အအပြောင်းအလဲများကို (Kd) မှုမရှိခြင်းကိုဖြစ်ကြပြီး, BP ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖွယ်မရှိပေ။ MPTP ကြွက်များတွင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏တိုးမြှင်အကျိုးသက်ရောက်မှု dopamine အဆင့်ဆင့်ကုန်ခမ်းဆက်လက်တည်ရှိနေချိန်တွင်တိုးမြှင့်အဲဒီ receptor အရေအတွက်ကမှတဆင့် dopaminergic neurotransmission ပိုကောင်းအောင်ဒဏ်ရာရဦးနှောက်၏ကြိုးပမ်းမှုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ လေ့ကျင့်ခန်းမှ MPTP ကြွက်၏တိုးမြှင့်တုန့်ပြန်သည့် striatal circuitry နဂိုအတိုင်းအခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမကျမည်အကြောင်းအရာ neuroplasticity ခံယူဖို့နဂိုအတိုင်းဦးနှောက်, နှိုင်းယှဉ်ဒဏ်ရာရ၏ကြီးမြတ်သောအလားအလာဖော်ပြသည်။ dopamine အဆင့်ဆင့် MPTP ကြွက်များတွင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့သိသိသာသာမပြောင်းကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို DA-D2R အတွက်အစားထိုးအပြောင်းအလဲများကိုလေ့ကျင့်ခန်း related တိုးတက်လာသောမော်တာစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ပေပုံရိပ်အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ MPTP ဆား-ကုသကြွက်မှဆွေမျိုး lesioning ပြီးနောက် DA-D2R ကို BP အတွက်ကျဆင်းခြင်းလေ့လာသည်။ ဤသည် DA-D2R ပရိုတိန်းစကားရပ်မပြောင်းလဲမှုကိုကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည့်အတွက်အနောက်တိုင်း immunoblotting မတူဘဲ၌ရှိ၏။ အဆိုပါ DA-D2R ပေ radioligands မှ binding မှယေဘုယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်မရအဆုံးစွန်အတူမျက်နှာပြင်နှင့် intracellular အခန်းအကြားတစ်ဦးပြောင်းလဲနေသော equilibrium ရှိ။ အဆိုပါ dopamine-ကုန်ခမ်းပြည်နယ်များတွင်အစားထိုးယန္တရားများ [မရပါဖြစ်နိုင်သည်အရာ DA-D2R များအတွက် intracellular ရေကူးကန်ထဲမှာအပြောင်းအလဲမှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်18F ကို] binding fallypride ပေမယ့်အနောက်တိုင်း immunoblotting အတွက်ထောက်လှမ်းဘို့မရရှိသေး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်မတူဘဲ, အ DA-D2R အတွက်အစားထိုးတိုး PD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကြွက်များတွင် nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် MPTP, ဒါမှမဟုတ် 6-OHDA ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်အစီရင်ခံခဲ့သည်။25 စာပေမှာတော့ DA-D2Rs ၏အရှုံးကြောင့် striatopallidal အာရုံခံသို့မဟုတ် cholinergic interneurons အတွင်း dopaminergic ဆိပ်ကမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ပေါင်းစပ်ကျန်ရှိသောအပေါ်တိုးမြှင့်စကားရပ်ကနေ DA-D2Rs ရလဒ်များကိုအတွက်တိုးသော်လည်း dopaminergic အာရုံခံ၏ယိုယွင်းမှသတင်းများအရဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေလေ့လာမှုနှင့်စာပေ၏ရှိသူများအကြားဒါဟာကွာဟမှု, လေ့လာမှုများအကြားကိုတွေ့ရှိရပါသည်များ၏ပြင်းထန်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။11 အထူးသ MPTP-သွေးဆောင်ဆဲလ်အရှုံးမှတဆင့် presynaptic DA-D2Rs ၏ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ယောက်တည်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်သွေးဆောင်မည်သည့် postsynaptic အစားထိုးအပြောင်းအလဲများကို offset ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MPTP အတွက် DA-D2R ကို BP အတွက်တိုးနှင့်စကားရပ်အဆင့်ဆင့်ကိုစောငျ့ရှောကျနိုငျစှမျးမရှိသော (Non-လေ့ကျင့်ခန်း) ကြွက်ကြောင့် 82 နှိုင်းယှဉ် 10 ရက်ပေါင်းမှာလေ့လာမှု (68% dopamine တွေပျက်စီးမှုရဲ့အဆုံးမှာ dopamine အဆင့်ဆင့်၏ကျိုးနွံပြန်လည်နာလန်ထူရန်ဖြစ်နိုင်သည် 42 ရက်ပေါင်း postlesion မှာ% လျော့ကျ) ။ သို့သော်လည်း dopamine ၏သေးငယ်တဲ့နာလန်ထူပြသသောဤပု MPTP ပေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်များအဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်, (အဘယ်သူမျှမလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်တွေဟာ MPTP ကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်) DA-D2R ကို BP ၏လာပါသည်။
DA-D1Rs နှင့် D2Rs များ၏အများစုသည် cortex (သို့မဟုတ် thalamus) ကနေ glutamatergic နှင့် dopaminergic အာရုံခံ၏ cholinergic interneurons နှင့်ဆိပ်ကမ်းအပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနောက်ထပ် receptors နှင့်အတူ MSNs ၏ dendritic ကျောရိုးအပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်နှင့် substantia nigra အသီးသီး compacta အဆန်းစစ်မှု။26 dopamine ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာ MSN ကိုမှာ corticostriatal သို့မဟုတ် thalamostriatal glutamatergic neurotransmission modulate ရန်ဖြစ်ပါသည်။ Glutamatergic neurotransmission DA-D1Rs မှတဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် DA-D2Rs မှတဆင့်လျော့နေသည်။27-29 dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အခြေအနေများအရ, ကျောရိုးနှင့် Synaptic ဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်သည့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏ MSNs်DA-D2R အပေါ်ရှုံးနိမ့်နေကြသည်။30 ဒါဟာအရှုံးကြောင့်တိုးလာ glutamatergic corticostriatal neurotransmission ဖို့ MSNs အတွင်း hyperexcitability ပြည်နယ်နှင့်အတူလိုက်ပါသွားသည်။31-33 PD ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်, ဒီတိုးလာ glutamatergic drive ကို parkinsonian ကဲ့သို့မော်တာအပြုအမူနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။34 အဆိုပါ dopamine ၏လျှောက်လွှာသို့မဟုတ်ယင်း၏ agonists မှတဆင့်ဒီ hyperexcitable ပြည်နယ်၏ attenuation parkinsonian မော်တာလိုငွေပြမှု၏ပွောငျးပွစေပါတယ်။35,36 ဤအအစီရင်ခံစာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအလငျး၌, ငါတို့က high-ပြင်းထန်မှုလေ့ကျင့်ခန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများသည့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း (သို့သော်မ DA-D2R တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်း) တွင်တိုးမြှင့် DA-D1R စကားရပ်မှတစ်ဆင့်အချက်ပြ dopaminergic မြှင့်တင်ရန်နှင့်မှတဆင့်မော်တာ function ကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ကြောင်း hypothesize glutamatergic စိတ်လှုပ်ရှား၏ဖိနှိပ်မှု။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၏အဓိကနိဂုံးချုပ်အထူးကြပ်မတ်ပြေးစက်ပြေး၏ပုံစံအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း striatal DA-D2Rs, ဒဏ်ရာရဦးနှောက်ထဲမှာအများဆုံးထင်ရှားနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၏တိုးတက်လာခဲ့သည်ဟူသောအသုံးအနှုနျးတစျဆငျ့ neuroplasticity နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီး [အတူ noninvasive ပေ-ပုံရိပ်ချဉ်းကပ်18F ကို] fallypride အထူးကြပ်မတ်ပြေးစက်လေ့ကျင့်ခန်းလည်း PD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် DA-D2R ပြောင်းလဲမှုများစေပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု dopamine ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက် preclinical သုတေသန၏တန်ဖိုးနှင့် PD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပုံရိပ်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့လာမှုများကိုနားလည်ဆီသို့နှစ်ဦးစလုံးကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးဘို့ Translational သုတေသန၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
ဤလုပ်ငန်းကိုအဆိုပါ USC CTSI အပြည့်အဝရှေ့ပြေး Grant ကအစီအစဉ်ကနေထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ပါကင် (Los Angeles မြို့), အပါကင်မဟာမိတ်အဖွဲ့သည် Whittier ပါကင်ဆန်ရောဂါပညာရေးအုပ်စု, NINDS RO1 NS44327-1, NIA မှ (ထံမှရက်ရက်ရောရောရန်ပုံငွေများခဲ့သည် AG က 21937) နှင့်အမေရိကန်ကြည်းတပ် NETRP W81XWH-04-1-0444 ။ MGV USC အာရုံကြောသိပ္ပံဘွဲ့လွန်အစီအစဉ် Merit Fellowship ၏တစ်ဦးလက်ခံရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Micro-ပေပုံရိပ်နှင့်မောက် MRI နှင့်အတူအကူအညီများအတွက် Saban သုတေသနအင်စတီကျုမှာအသေးစားတိရိစ္ဆာန် Imaging ကသုတေသန Core ကနေဒေါက်တာ Rex ကျုံးနှင့်အတူအကူအညီများအတွက် USC အသေးစားတိရိစ္ဆာန် Imaging က Core ကနေရိုင်ယန် Park နှင့်ဒေါက်တာပတေရုသ Conti ကျေးဇူးတင်ဖို့အလိုရှိ၏။ ကျနော်တို့ HPLC ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုအဘို့အပြေးစက်လေ့ကျင့်ခန်းအတူအကူအညီတောင်းရီ-Hsuan (လီလီ) လိုင်နှင့် Avery Abernathy ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ရက်ရက်ရောရောပံ့ပိုးကူညီမှုများအတွက်ဂျော့ခ်ျနှင့် MaryLou Boon, ဝေါလ်တာနှင့်ဆူ Doniger နှင့်ရောဘတ် Gonzales အပါအဝင် USC ပါကင်ဆန်ရောဂါဆိုင်ရာသုတေသန Group ၏သူငယ်ချင်းများမှကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
မှတ်ချက်အထောက်အထားအတွက်ဆက်ပြောသည်: ဤဆောင်းပါးသည် 19 အောက်တိုဘာလ 2010 အပေါ်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အမှားနောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်အသိပေးစာနှစ်ဦးစလုံးကိုဆုံးခဲ့ကြကြောင်းညွှန်ပြရန်အအွန်လိုင်းနှင့်ပုံနှိပ်ဗားရှင်းများတွင်ပါဝင်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ဖော်: USC အာရုံကြောသိပ္ပံဘွဲ့လွန်အစီအစဉ် Merit Fellowship (သင်္ဘော MV), NINDS RO1 NS44327-1 (သင်္ဘော MV, CW, JW, MJ နှင့်မိသားစုဆရာဝန်), USC CTSI အပြည့်အဝရှေ့ပြေး Grant ကအစီအစဉ် (QL, AN, MJ, မိသားစုဆရာဝန်) ။
စာရေးသူအခန်းကဏ္ဍ: အားလုံးစာရေးဆရာများသည်ဤစာမူကိုထုတ်လုပ်အတွက်နျဆာပခဲ့သညျ။ သုတေသနစီမံကိန်း Concept: မိသားစုဆရာဝန်, BF, MJ, RL, JW ။ စီမံကိန်း execution: သင်္ဘော MV, QL, AN, CW, MJ, မိသားစုဆရာဝန်။ ဒေတာများစုဆောင်းခြင်း, ထုတ်ယူခြင်း, စာရင်းအင်းသုံးသပ်ခြင်း: သင်္ဘော MV, QL, BF, AN, RL, MJ, မိသားစုဆရာဝန်။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အဘိတ်: သင်္ဘော MV, QL, BF, RL, JW, MJ, မိသားစုဆရာဝန်။
1 ။ ဘာဂန် JL, Tools T က, Elliott သည် RGr, Wallace B, ရော်ဘင်ဆင် K ကို Maitland CG ။ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာအတွက်အေရိုးဗစ်စွမ်းရည်နှင့်လှုပ်ရှားမှုစတင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ NeuroRehabilitation ။ 2002; 17: 16-168 ။ [PubMed]
2 ။ Comella CL, Stebbins GT ကို, Brown က-Toms N ကို, Goetz CG ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါ: တစ်ထိန်းချုပ်ထားလက်တွေ့စမ်းသပ်။ အာရုံကြော။ 1994; 44 (3 အပိုင်း 1): 376-378 ။ [PubMed]
3 ။ Schenkman M က, ခန်းမ: D, Kumar က R ကို, Kohrt WM ။ ပါကင်ရောဂါနှင့်အတူလူများ၏လှုပ်ရှားမှု၏စီးပွားရေးကိုတိုးတက်စေရန်ခံနိုင်ရည်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရေး: သုံးကိစ္စတွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ Phys Ther ။ 2008; 88: 63-76 ။ [PubMed]
4 ။ Pothakos K ကို Kurz MJ, Lau YS ။ ပြင်းထန် neurodegeneration နှင့်အတူပါကင်ဆန်ရောဂါ၏နာတာရှည် mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်အမူအကျင့်လိုငွေပြမှုအပေါ်ခံနိုင်ရည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများပြန်လည်ထူထောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ BMC neuroscience ။ 2009; 10: 1-14 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5 ။ Fisher သည် et al Petzinger GM က, နစ်ဆင် K သည်, BE ။ အဆိုပါ 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-lesioned mouse ကို Basal ganglia အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးတွေအမူအကျင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် neuroplasticity ။ J ကို neuroscience Res ။ 2004; 77: 378-390 ။ [PubMed]
6 ။ Petzinger GM က, Walsh JP, Akopian, G, et al ။ Basal ganglia ဒဏ်ရာများ၏ 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-lesioned mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက် dopaminergic ဂီယာအပေါ်ပြေးစက်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 5291-5300 ။ [PubMed]
7 ။ ဝမ် GJ, Volkow ND, မုဆိုး JS, et al ။ လူ့ striatal dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏သက်ရောက်မှု၏လေ့လာမှုများပေ။ J ကို Nucl Med ။ 2000; 41: 1352-1356 ။ [PubMed]
8 ။ Ginovart N ကို, Farde L ကို, Halldin ကို C, Swahn CG ။ [11C] ကမျောက်ဦးနှောက်ထဲမှာ D2-dopamine receptors မှ binding raclopride အပေါ် Synaptic dopamine ၏ reserpine-သွေးဆောင်ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ synapses ။ 1997; 25: 321-325 ။ [PubMed]
9 ။ 2F-fallypride သုံးပြီး Mukherjee က J ကို, ခရစ်ယာန် BT, Narayanan TK, ရှီ B, dopamine, D-18 အဲဒီ receptor ထေို၏ Mantil ဂျေအကဲဖြတ် clozapine, risperidone, နှင့်ကြွက်များတွင် Vivo အတွက် haloperidol နှင့် nonhuman မျောက်ဦးနှောက်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2001; 25: 476-488 ။ [PubMed]
10 ။ Honer M က, Bruhlmeier M က, Missimer J ကို, Schubiger AP, Ametamey သည် SM ။ Quad-HIDAC ပေသုံးပြီးကြွက်တွေမှာ striatal D2 receptors ၏ dynamic ပုံရိပ်။ J ကို Nucl Med ။ 2004; 45: 464-470 ။ [PubMed]
11 ။ Falardeau P ကို, Bedard PJ, ဦးနှောက် dopamine အရှုံးနှင့် MPTP မျောက်တွေကို D2 dopamine အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆအကြား Di Paolo တီဆက်ဆံရေး။ neuroscience လက်တ။ 1988; 86: 225-229 ။ [PubMed]
12 ။ Mukherjee က J ကို, ယန် ZY, ဘရောင်း T က, et al ။ extrastriatal dopamine D-2 အဲဒီ receptor ၏ပဏာမအကဲဖြတ်မြင့်ဆှဖှေဲ့ radioligand, 18F-fallypride သုံးပြီးကြွက်နှင့် nonhuman မျောက်ဦးနှောက်အတွက် binding ။ Nucl Med Biol ။ 1999; 26: 519-527 ။ [PubMed]
13 ။ ခရစ်ယာန် BT, Narayanan TK, ရှီ B, striatal ၏ Mukherjee ကဂျေ quantitative နှင့် nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် [(2) က F] fallypride ၏ပေပုံရိပ်သုံးပြီး extrastriatal D-18 dopamine receptors ။ synapses ။ 2000; 38: 71-79 ။ [PubMed]
14 ။ Qi J ကို, Leahy RM, ချယ်ရီ SR, Chatziioannou တစ်ဦးက, Farquhar TH ။ Micro-ပေသေးငယ်တဲ့-တိရိစ္ဆာန်ကင်နာကို အသုံးပြု. high-resuulution 3D Bayesian ပုံရိပ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး။ Phys Med Biol ။ 1998; 43: 1001-1013 ။ [PubMed]
15 ။ Ichise M က, Toyama H ကို, Innis RB, Carson RE ။ linear ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့် neuroreceptor parameter သည်ခန့်မှန်းချက်တိုးတက်စေရန်မဟာဗျူဟာများ။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 2002; 22: 1271-1281 ။ [PubMed]
16 ။ Logan J ကို, မုဆိုး JS, Volkow ND, ဝမ် GJ, Ding YS, Alexoff DL ။ ပေအချက်အလက်များ၏ဂရပ်ဖစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှအသှေးကိုနမူနာမရှိဘဲဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်အချိုး။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 1996; 16: 834-840 ။ [PubMed]
17 ။ Studholme ကို C, Hill က DL, Hawk DJ သမား။ voxel တူညီဆောင်ရွက်မှုများ၏ multiresolution optimization အားဖြင့်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုများနှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography ဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေသုံးခုရှုထောင်မှတ်ပုံတင်ရေး automated ။ Med Phys ။ 1997; 24: 25-35 ။ [PubMed]
18 ။ Mintun, MA, Raichle ME, Kilbourn MR, Wooten gf, Welch MJ ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူဆိုဒ်များ binding မူးယစ်ဆေးများအတွက် Vivo အကဲဖြတ်များအတွက်တစ်ဦးကအရေအတွက်မော်ဒယ်။ အမ်း Neurol ။ 1984; 15: 217-227 ။ [PubMed]
19 ။ Lammertsma AA ကို, Hume SP ။ PET အဲဒီ receptor လေ့လာမှုများအဘို့ကိုကိုးကားတစ်ရှူးမော်ဒယ်ရိုးရှင်းသော။ Neuroimage ။ 1996;4(3 အပိုင်း 1): 153-158 ။ [PubMed]
20 ။ Paxinos, G, Franklin KBJ ။ stereotaxic သြဒီနိတ်အတွက် mouse ကိုဦးနှောက်။2။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 2001 ။
21 ။ ဂျွန်ဆင်မဂ္ဂါဝပ်, Chotiner JK, Watson ဟာ JB ။ တစ်ခုတည်းကြွက် hippocampal ချပ်ကနေ synaptoneurosomes ၏အထီးကျန်နှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ။ 1997; 77: 151-156 ။ [PubMed]
22 ။ Laemmli ဗြိတိန်။ အဆိုပါ bacteriophage T4 ၏ဦးခေါငျးကိုပရိသတ်ကာလအတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပရိုတိန်း၏ Cleavage ။ သဘာဝ။ 1970; 227: 680-685 ။ [PubMed]
23. သောမတ်စ် JR, Salazar W က, Landers DM ။ အဘယ်အရာကို p <05 ပျောက်ဆုံးနေသနည်း Effect အရွယ်အစား။ Res Q လေ့ကျင့်ခန်းအားကစား။ 1991; 62: 344-348 ။ [PubMed]
24 ။ Cropley VL, Innis RB သန် PJ, et al ။ အသေးစား dopamine လွှတ်ပေးရန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် [(18) က F] အပေါ် dopamine တွေပျက်စီးမှုမရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုကျန်းမာလူသားတွေအတွက် binding fallypride ။ synapses ။ 2008; 62: 399-408 ။ [PubMed]
25 ။ Hurley MJ, Jenner P. ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine receptors ၏လေ့လာမှုကနေဘာသင်ယူခဲ့သလဲ Pharmacol Ther ။ 2006; 111: 715-728 ။ [PubMed]
26 ။ Smith က Y ကို, Villalba R. Striatal နှင့် Basal ganglia အတွက် extrastriatal dopamine: ပုံမှန်နှင့် Parkinsonian ဦးနှောက်အတွက်၎င်း၏ခန္ဓာဗေဒအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ MOV disorders ။ 2008; 23 (ပျော့ပျောင်း 3): S534-S547 ။ [PubMed]
27 ။ Cepeda ကို C, Buchwald NA, Levine က MS ။ အဆိုပါ neostriatum အတွက် dopamine ၏ Neuromodulatory လုပ်ရပ်များ activated အဆိုပါ excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဲဒီ receptor Subtype အပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်ကြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ။ 1993; 90: 9576-9580 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ Levine က MS, Altemus KL, Cepeda ကို C, et al ။ NMDA အဲဒီ receptor-mediated တုံ့ပြန်မှုအပေါ် dopamine ၏ Modulatory လုပ်ရပ်များ D1A-လစ်လပ် Mutant ကြွက်များတွင်လျှော့ချနေကြသည်။ J ကို neuroscience ။ 1996; 16: 5870-5882 ။ [PubMed]
29 ။ Umemiya M က, Raymond LA က။ ကြွက် neostriatal အာရုံခံအတွက် excitatory postsynaptic ရေစီးကြောင်း၏ Dopaminergic မော်ဂျူ။ J ကို Neurophysiol ။ 1997; 78: 1248-1255 ။ [PubMed]
30 ။ နေ့ M က, et al ဝမ် Z ကို, Ding J ကို။ ပါကင်ရောဂါမော်ဒယ်များအတွက် striatopallidal အာရုံခံအပေါ် glutamatergic synapses ၏ရွေးချယ်ဖျက်သိမ်းရေး။ နတ် neuroscience ။ 2006; 9: 251-259 ။ [PubMed]
31 ။ VanLeeuwen je, Petzinger GM က, Walsh JP, Akopian GK, Vuckovic M က, Jakowec မဂ္ဂါဝပ်။ Basal ganglia ဒဏ်ရာများ၏ 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-lesioned mouse ကိုမော်ဒယ်အတွက်ပြေးစက်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူပြောင်းလဲ AMPA အဲဒီ receptor စကားရပ်။ J ကို neuroscience Res ။ 2010; 88: 650-668 ။ [PubMed]
32 ။ ဟာနန်ဒက်ဇ်-Echeagaray အီး, Starling AJ, Cepeda ကို C, Levine က MS ။ striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် D2 dopamine receptors အားဖြင့် AMPA ရေစီးကြောင်း၏ Modulation: လိုအပ်သော dendrites ရှိပါသလဲ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 19: 2455-2463 ။ [PubMed]
33 ။ Surmeier DJ သမား, Ding J ကို, နေ့ M က, ဝမ် Z ကို, striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် striatal glutamatergic အချက်ပြ၏ Shen ဒဗလျူ D1 နှင့် D2 dopamine-receptor မော်ဂျူ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30: 228-235 ။ [PubMed]
34 ။ Calabresi P ကို, Mercury NB, Sancesario, G, dopamine-denervated striatal အာရုံခံ၏ဘာနာဂျီ Electrophysiology ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတှကျအဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက်။ 1993; 116 (အပိုင်း 2): 433-452 ။ [PubMed]
35 ။ Ballion B, Frenois က F, Zold CL, Chetrit J ကို, Murer MG, Gonon အက်ဖ် D2 အဲဒီ receptor ဆွ, ဒါပေမယ့်မရ D1, Parkinson တစ်ကြွက်မော်ဒယ်အတွက် striatal equilibrium restores ။ Neurobiol dis ။ 2009; 35: 376-384 ။ [PubMed]
36 ။ Calabresi P ကို, Pisani တစ်ဦးက, Centonze: D, ဘာနာဂျီ Synaptic plasticity နှင့် dopamine နဲ့ gluta အကြားဇီဝကမ္မ interaction က